New atụmatụ nke Android 12 e leaked | Gam akporosis
Android 12 na-abịa na ọnọdụ egwuregwu, belata ncha ọkụ na-agbanwe ngwa ngwa ma gbanwee ntụgharị akpaaka
Ihe a na-atụ anya ya gam akporo 12 ha toro ogologo. Ndị a gụnyere, n'ụkpụrụ, interface na ọtụtụ mgbanwe, nwee ntụsara ahụ, nke dịgasị iche ma ọkaibe. E nwekwara okwu nke a wuru na-otu-aka mode.
Na-adịbeghị anya, nke chọpụtara site na ụmụ nwoke nke XDA-Mmepe, kwuru banyere ihe atọ ọhụrụ, nke bụ otu ihe ahụ akọwapụtara na aha ahụ: Ọnọdụ egwuregwu, mmezi ngwangwa nke ibelata nchapụta na ịgbanwee ntụgharị akpaka. Google na-arụ ọrụ na ha na nsụgharị nke OS, nke na-erubeghị, ọbụnadị maka ndị mmepe na beta testers, ọ bụ ezie na ndị a nwere ike ịbịaru ụdị mbụ maka ndị mmepe, nke nwere ụbọchị ịhapụ nke taa, Eprel 17. .
Igwefoto n'ihu nke ekwentị ga-arụ ọrụ dị mkpa na ntụgharị akpaka nke ekwentị. Ọ ga-achọpụta mgbe ị na-agbanwe site na eserese gaa na odida obodo. Ruo ugbu a, gyroscope na data accelerometer bụ naanị ndị ejiri maka nke a, ọ bụ ezie na ndị a nwekwara ike ịba uru na ntụgharị akpaka ọhụrụ ka mma.
Ọnọdụ egwuregwu nke gam akporo 12 ga-arụ ọrụ dị ka nke anyị na-ahụkarị n'ọtụtụ nhazi nke ịhazi dịka Xiaomi MIUI, yana Game Turbo ya. Nke a ga - enyere anyị aka ijikwa ma jikwaa ọrụ na njirimara dịka ọkwa na ụda maka mmụba dị ukwuu na mmebi nke egwuregwu ma zere nkwụsịtụ mpụga n'oge mmebi nke otu.
Ọrụ imepụta akpaaka agaghị abụ nnukwu nsogbu, n'ezie. N'ime nke a enweghi ọtụtụ nkọwa gbasara ya. Naanị eziokwu ahụ Google na-ezube itinye mpempe ma ọ bụ mmanya na-agbanwe akpaka na gam akporo 12, dị ka nke anyị chọtara ugbu a mgbe anyị gosipụtara na ogwe ngosi, yana mgbanwe nchapụta ọkụ akpaka. Anyị na-echere nkọwa ndị ọzọ gbasara atụmatụ a, nke ga-abịa na mmelite a na-ahụbeghị na nsụgharị nke os.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 12 na-abịa na ọnọdụ egwuregwu, belata ncha ọkụ na-agbanwe ngwa ngwa ma gbanwee ntụgharị akpaaka
Gam akporo BlueStacks emulator na-abịa mbipute 5 na akụkọ dị mkpa